Mucjiso Dunidu La Yaabban Tahay – Dal Dhan Oo Ilaahnimo U Aaminay Gabadh Yar Oo 7 Jir Ah Iyo Madaxweynahooda Oo Ka Barakaystay (Subxaanallaah) - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Mucjiso Dunidu La Yaabban Tahay – Dal Dhan Oo Ilaahnimo U Aaminay...
Mucjiso Dunidu La Yaabban Tahay – Dal Dhan Oo Ilaahnimo U Aaminay Gabadh Yar Oo 7 Jir Ah Iyo Madaxweynahooda Oo Ka Barakaystay (Subxaanallaah)
Inkasta oo dad badani rumaysan waayeen haddana Toddobaadkii ugu dambeeyey warbaahinta dunida waxa si weyn ugu jira warka la xidhiidha Gabadh yar oo 7 jir ah oo dadkoodii u ictiqaadeen mucjisooyin ay kaga barakaystaan xataa ay qaar badan oo dadkeeda ahi uba qaateen qof meeqaam sare oo Ilaahnimo ah gaadhsiisan oo la caabudi karo (Subxaanallaah), arrinkaasi oo noqday cawaannimo cusub oo soo korodhay.
Gabadh yar oo Todoba sano jir ah ayaa dalka Nepal loo xulay inay noqotov wax la caabudo ama Ilaah (Subxaanallaah) ka dib markii laga helay sida la sheegay tilmaamo dadka waddankaas ay ku xushaan qofka gaadhaya maqaam ilaahnimo ah oo ay u yaqaanaan (Kimaru).
Gabadhan oo lagu magacaabo Yunika ayaa Calaamadaha ay sheegeen inay ka heleen waxaaa ka mida inay suniyaheeda u eg yihiin kuwa lo’da, codkeeduna fasiix u yahay sida Boolo-boolada.
Waa caado dadka reer Nepal ay leeyihiin muddo qarniyo ah oo lagu doorto Ilaahyada Kimaru oo ay si isku mida u caabudaan Buudiyiinta iyo Hinduska.
Bandhiga roobka ee dalkaasi ka dhaca bisha July ayay isugu yimaadeen dad fara badan oo gabadhaas yarta ah u barakeysanayey, waxaana ka mid ahaa Ra’isal wasaaraha Nepal Pushpa Kamal Dahal.
Yunika oo da’deedu yar tahay ayaa waxay la nooshashay waalidkeed, waxayna dadka dalkaasi aaminsan yihiin in cid kastoo indhaheedu qabtaan ay barako iyo nasiib badan la kulmeyso.
Gabadhan yar aabaheed ayaa sheegay in markii gabadhood loo doortay waxa loo yeeray Ilhaanimada ay joojiyeen shaqadii ay hore u hayeen oo iyada uun ay ka fekeraan xanaanadeeda.
Qofka Kimaru noqda ayaa waxaa la sheegay in aan loo ogoleyn inuu ka baxo guriga, isla markaana ay cagahiiisu dhulka gaaraan.
Caado diimeedkan ayaa lagu tilmaamay iney ka mid tahay kuwo ugu liita ee caalamka ka jira, maadaama dadka aaminsan ay caabudaan qof iyaga la mid ah.